Linux 5.4 inomira kutsigirwa kweIA-64 kuvaka | Linux Vakapindwa muropa
Linux 5.4 inomira kutsigirwa kweIA-64 kuvaka
La ISA IA-64 akaberekwa akapotsa afa. Pakave nezvakawanda majee munguva yakapfuura nezve iyi Intel yekuvaka uye yayo Itanium microprocessor. Pakatanga ma AMD Opterons, vakapwanya Intel's Itaniums uye Intel vakaisa chirongwa ichi parutivi zvishoma kuti vatarise paXeon, vachizoburitsa chete yekudzokorodza kweapo masisitimu aitsamira pairi. Kuseri kweizvi zvese inyaya inonakidza inogona kutaurwa pane imwe nguva uye ine akati wandei wakabatanidzwa (ona HP vs Oracle kesi, iine Intel iri pakati) ...
Asi ikozvino ini ndinongotarisa pane nhau nezve kuuya Linux 5.4 kernel rutsigiro uye kusafarira kuenderera kutsigira nekuchengetedza mapurani eIntel's IA-64. Nenzira, usanetseke, hazvizokubate kunze kwekunge uine komputa huru pamba. Vanhu vazhinji vanovhiringidza IA-64 neiyo 86-bit x64 yekuwedzera uye haina chekuita nazvo. Iyo AMD64 (inonziwo Intel EM64T kana x86-64) ISA yakasiyana.
Kuvhiringidzika kwese kunouya nekuti Intel inonzi iyo x32-86 IA-32, uye vazhinji vanofunga kuti iyo x86-64 inozivikanwa seIA-64. Asi kwete, izvi iniSA yakanangana neItanium (kana Itanic, sevazhinji vachiseka vachidana kuti inyure seTitanic). Ichokwadi ndechekuti zvinokanganisa michina hombe iyo ichiri kuishandisa, seimwe iyo iyo HP, SGI Altix, nezvimwe zvakadaro ichiri kuichengetedza. Asi Intel inonyatsoziva kukundikana kwayo uye yakazivisa gore rapfuura kuti yaizomira kugadzira uye kutumira machipisi ayo ekutsiva muna 2021. HP yakavimbisa kutsigira vatengi vayo kusvika 2025.
Iyo Linux 5.4 kernel ichaunza mutyairi mutsva weSGI masisitimu eKutanga, asi inomira kutsigira SGI Altix. Weird, nekuti Altix inyowani pane mamwe maKutanga. Icho chikonzero chiri chaizvo kudzikiswa kweIA-64 rutsigiro. Mapakeji eIA-64 anga atove kuderera kwemakore, uye iyo kernel ichajoinha maitiro aya nekusunungurwa 5.4. Semuenzaniso, yatodzorwa yeGNU GCC 10 compiler, uye kana Linux ikajoinha izvozvi, ichave yekupedzisira kurohwa.
Nenzira, sechinhu chinoda kuziva, kutaura kuti kubviswa kwesigiro yeSGI Altix kunoreva kuchenesa kernel kodhi uye madhiraivha ayo achabviswa. zvinoreva kuregererwa kwemakumi mana emakumi emitsetse yekodhi. Izvo zvicharerutsa kernel zvishoma ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kernel » Linux 5.4 inomira kutsigirwa kweIA-64 kuvaka